Shwesandaw pagoda visit may cost more - Myanmar News - Mingalapar Forum
Started by BurmeseNews , Oct 06 2017 07:43 AM
Authorities are planning to collect fees for visitors entering Bagan’s Shwesandaw pagoda, which has the most beautiful view of sunrise and sunset among the dozens of pagodas in the area, to preserve the temple’s structure, saidalawmaker.
Member of Parliament of Mandalay Region Hluttaw U Wint Myint Khaing told The Myanmar Times on Thursday that the committee plans to collect an additional K200 for local visitors and K2000 for foreigners.
ပုဂံမှာ ရှိတဲ့ ဘုရားပေါင်းများစွာထဲက နေ၀င်ချိန်နဲ့နေထွက်ချိန်တွေကို ကြည့်ရှုဖို့ အကောင်းဆုံးဘုရားတဆူဖြစ်တဲ့ ရွှေဆံတော်ဘုရားကို ၀င်ကြေးတိုးမြင့်ဖို့ ဒေသအာဏာပိုင်တွေက စဉ်းစားနေတယ်လို့ ဥပဒေပြုရေး အဖွဲ့ဝင်တဦးက ဆိုပါတယ်။ ဒီတိုးမြင့်မှုဟာ ဘုရား ရေရှည်တည်တံဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
လွှတ်တော်အမတ် ဦးဝင့်မြင့်ခိုင်က အဂါနေ့က မြန်မာတိုင်းကို ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း ၂၀၀ ကျပ်နဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံခြားသား ၂၀၀၀ ကျပ်စီ ထပ်မံ ကောက်ခံဖို့ စီစဉ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Also tagged with one or more of these keywords: Bagan, Pagoda